Iyo Goridhe Standard Yezviri Kushambadzira | Martech Zone
Newsreach yakaburitsa zvese zviri zviviri infographic uye inoperekedza chena, Iyo Yechokwadi Kukosha kweMukati Kushambadzira.
Zvidimbu zvemhando yepamusoro zvemukati zvinokwanisa kukwezva nekubata vashandisi vewebhu, asi pavari vega havazove nemhedzisiro yaunoda. Zvemukati Kushambadzira zvinoda kuramba uchiedza kuburitsa nyowani, inoenderana nemhando yepamusoro zvidimbu. Mabhizimusi mazhinji anotarisana nematambudziko mukugadzira huwandu uye zvakasiyana zvezvinhu zvinobatika zvinodiwa, ndipo panowanikwa basa reKushambadzira Kwemukati. Sezvo neyakagadzirwa negoridhe maitiro, maoko ehunyanzvi anodikanwa pane ese kusvika padanho kuburitsa chigadzirwa chemhando yepamusoro chapera.
Imwe nhamba mune ino infographic inofanirwa kuve yekuvhura maziso kune vanhu vanotenda kuti kutsvaga kunofanirwa kusiiwa zvachose: mamiriyoni 27 zvidimbu zvemukati zvinogoverwa kuburikidza nevezvenhau. Izvi zvichiri marara pakuenzanisa ne 131 mabhiriyoni tsvakiridzo dzakagadzirwa zvemukati zuva rega rega. Tinotenda kuti kutsvaga ihwo hwaro… asi zvirimo zvikuru zvinokanganisa zvawatsvaga nekuda kwekukura kwenzanga dzekutsvaga injini algorithms. Usadaro siya SEO zvachose… Asi tarisa pane zvakakura zvemukati uye kusimudzira kweizvozvo zvemukati usati unetsekana nekuzadza mazwi akakosha kana backlinking!
Tags: Content Marketingzvirongwa zvekushambadzira zvemukatiinfographic
Big Data Inounza Kushambadzira Makuru Makore
Kutenda nekutumira Douglas. Chaizvoizvo chinonakidza kuverenga kwako kutora pamatemu.